Izahay dia mamakafaka ny Samsung Galaxy A7 (2018), fakantsary telo eo anelanelany | Androidsis
Izahay dia mamakafaka ny Samsung Galaxy A7 (2018), fakantsary telo eo afovoany
Michael Hernandez | | About us, hevitra
Araka ny nampanantenainay taorian'ny fahatsapana voalohany, dia miverina amin'ny famakafakana maharitra ny Samsung Galaxy A7 (2018), fantsona iray izay tadiavin'ny orinasa Koreana Tatsimo hahazoana ny seza fiandrianana eo anelanelany, mihamalefaka hatrany amin'ireo marika manana fiaviana sinoa toa an'i Huawei izay manome fantsom-pahefana mahay manodidina ny 300 euro.
Noho izany, Samsung dia te-hanome "volo" ho an'ny antonony miaraka amin'ny , toy ny mahazatra, amin'ny Androidsis.
Ity terminal vaovao an'ny fianakaviana «A» Ao anatin'ny katalaogin'i Samsung ho an'ny terminal finday, miaraka amin'ny famaranana izay manome fahatsapana tena tsara ao an-tanana izy rehefa afaka fotoana fohy, miaraka amina fakan-tsary telo ao aoriana izay te hampifantoka ny saintsika ary hanome "rendrarendra" kely ho an'ny Fitaovana feno, saingy misy teboka hafa izay nahatonga antsika hanandrana mangidy tao anatin'ny folo andro mahery nandinihantsika azy, noho izany dia hiresaka bebe kokoa amin'ny lalina momba ny zavatra atolotray ho antsika Galaxy A7 avy amin'ny taona 2018 ity ary Ahoana Afaka mahazo izany amin'ny Amazon amin'ny 359 euro fotsiny isika.
1 Toetra sy fitaovana teknika
2 Volavola sy fitaovana: Fihetseham-po Premium sy famaranana kalitao
3 Ireo fakantsary telo, tsara ve izany?
4 Fampisehoana sy fizakan-tena: Tsy nahita tsy nampoizina izahay
5 Multimédia sy fifandraisana: Eto dia mampiseho ny tratrany ny Galaxy A7 (2018)
6.1 Ratsy indrindra
6.3 Ny tsara indrindra
Toetra sy fitaovana teknika
Toy ny mahazatra dia hanao fitsidihana haingana ny "isa" isika, ny fitaovana ary inona ity Samsung Galaxy A7 tamin'ny taona 2018 ity dia afaka manome antsika ara-taratasy azy ireo amin'ny taratasy.
Famaritana ara-teknika Samsung Galaxy A7 (2018)
modely A7 (2018)
Operating System Android 8.0 miaraka amin'ny Samsung Experience
efijery 6-inch Super AMOLED miaraka amin'ny vahaolana FHD + (2220 x 1080 px) sy ny tahan'ny 19: 9 miaraka amin'ny 411 PPI
processeur Exynos 7885 fototra miaraka amin'ny 2.2 GHz roa ary enina amin'ny 1.6 GHz
Tahiry anatiny 64/128 azo velarana amin'ny microSD hatramin'ny 512 GB
Fakan-tsary aoriana Fakan-tsary Triple 24MP misy f / 1.7 - 5MP misy f / 2.2 ny zoro malalaka - 8MP misy f / 2.2 ary zoro zoro somary malalaka miaraka amin'ny firaketana Full HD 30FPS
Fakan-tsary aloha 24 MP miaraka amin'ny f / 2.0 ary ny fandraisam-peo Full HD
Conectividad GPS sy Bluetooth 5.0 - WiFi 802.11 ac ary LTE Cat6 miaraka amin'i NanoSIM sy 3.5mm Jack
fiarovana Mpamaky ny rantsan-tànana sy scanner momba ny tarehy mahazatra
vidiny Avy amin'ny 349 euro
Volavola sy fitaovana: Fihetseham-po Premium sy famaranana kalitao
Ny fahatsapana voalohany amin'ny terminal dia manan-danja tokoa, ary ny fahatsapana voalohany navelan'i Galaxy A7 2018 ho antsika amin'ny ankapobeny dia tena tsara, indrindra amin'ny loko manga izay nosedraina. Hitanay ny aliminioma voalamina ho an'ny tariby telefaona, mamirapiratra, mamirapiratra ary miditra amin'ny masonao hatramin'ny voalohany. Any aoriana dia manana vera toa tsy misy karazana fonosana ho an'ny dian-tànana sy tasy isika, ary mampiseho izany, saingy manadino isika rehefa jamban'ny manga elektrika isika, Samsung mikasa ny hidiran'ny A7 anao bebe kokoa noho ny amin'ny fahatsiarovan-tena, ary ny zazalahy no manao izany.
Dimensions: X X 159,8 76,8 7,5 MG
lanja: Gramin'ny 168
Ny fakantsary telozoro dia zorony ary mipoitra mitsangana, raha ny ilany ankavanana kosa dia ho an'ny keypad iray manontolo, bokotra kely roa kely, somary kely ary misy dia kely, ary bokotra "herinaratra" somary lehibe kokoa, miaraka amin'ny dia azo ekena Ary miasa toy ny dian-tànana izany. mpamaky, ity no fanasongadinana ny famolavolana ny Galaxy A7. Manana ny faritra ambany amin'ny jack headphone 3,5 mm isika, fifandraisana microUSB (eny, hiresaka momba izany isika any aoriana) ary slot iray misy ilay mpandahateny tokana ananan'ilay fitaovana. Ny fitaovana 6-inch dia somary lehibe, indrindra satria ny rafitra efijery rehetra Izay noresahin'izy ireo dia tsy dia be loatra, saingy manify sy maivana, mora entina ary manampy azy ireo fitaovana.
Ireo fakantsary telo, tsara ve izany?
Samsung dia miakatra ao amin'ny Galaxy "S" izay manana kalitao fanodinana zara raha ampitahaina amin'ny fifaninanana, na izany aza, ny fampidirana ity sensor fahatelo ity ao amin'ny fakantsary Galaxy A7 dia mametraka ny lalitra ao ambadiky ny sofintsika. Mahita fakantsary triple aoriana 24, 5 ary 8MP tsirairay avy izahay, ary miverina miaraka amina aperture afovoany 1.7, 2.2 ary 2.2, ampiarahina a Ultra zoro mivelatra. Midika izany fa amin'ny ambaratonga manjavozavo amin'ny "maody fakana sary" dia miaro tena tsara izy, maka ny antsipiriany saika tonga lafatra, indrindra amin'ny toerana misy jiro tsara, miova ny toe-javatra rehefa miloka amin'ny hazavana na haizina isika, misy "tabataba" hiseho. »Ao amin'ny sary izay mampahafantatra antsika haingana fa tsy miatrika Galaxy S isika, na firy na firy ny sensor fahatelo nampidiriny.
Angola Ultra Wide
Mode HDR mandeha ho azy
Tsy isalasalana fa ny fahombiazan'ny fitambarana dia nalain'ny Ultra Wide Angle napetraka izay ahafahantsika maka sary kanto manana kalitao somary somary lenta, miaraka amin'ireo fiaramanidina izay tsy azontsika tratrarina raha tsy tamin'ny ekipa matihanina (na io Galaxy A7 io mazava ho azy). Izany no antony, fa ity sensor fahatelo ity dia tsy mahatonga ny fakantsary Galaxy A7 ho tsara kokoa noho ny an'ny sasany amin'ireo terminal misy ny faritra misy azy ao anaty toe-piainana tsara, izay mahatonga azy io ho maro karazana kokoa. Ny autofocus video dia angamba nanome valiny miovaova amintsika, fa ny fanamafisana ny horonantsary amin'ny famaha Full HD 30 FPS dia tena tsara. Toy ny mahazatra, eto ambanin'ireto andalana ireto dia manana lisitr'ireo sary amin'ny toe-javatra samihafa ianao nefa tsy misy fanodinana na famoretana hahafahanao mahita izay lazainay ho anao. Ny fakantsary selfiee, mandritra izany fotoana izany, manolotra fampisehoana tsara, miaraka amina maody hatsaran-tarehy izay mbola sarotra zatra ihany, saingy afaka manolotra maody fakana sary nefa tsy mikorontana.
Fampisehoana sy fizakan-tena: Tsy nahita tsy nampoizina izahay
Sarotra ny mamerina mijery ny zava-bitan'ity Galaxy A7 2018 ity, mahita mpikirakira Exynos 7885 misy fotony valo isika, ny roa amin'izy ireo dia 2,2 GHz ary ny enina ambiny dia 1,6 GHz, processeur mid-range izay miaraka amina memoara 4 GB RAM ao ny tranga ny terminal izay efa nosedraina. Tokony holazaintsika fa ity Galaxy A7 ity dia mivezivezy amin'ny rafitra fiasa satria finday mihoatra ny 350 euro dia tokony hifindra, araka ny efa nampoizina, na izany aza, ny traikefa dia tsy be ranoka toy izay hitantsika amin'ireo vahaolana Xiaomi amin'ny vidiny mitovy amin'izany. Ity indray dia ny namboarina ho an'ny Samsung, izay na dia nihatsara be aza rehefa mandeha ny fotoana, dia mifanaraka amin'ny Galaxy A7 toy ny fonon-tànana, saingy somary lehibe loatra ho an'ireo terminal eo anelanelany. Toy izany koa, ity Galaxy A7 ity dia miaraka amin'ny Android Oreo 8.0. Raha fintinina, tsy misy fampiharana manana fahombiazana sary ambony nanolotra olana ho antsika, ny Galaxy A7 dia miaro tena tsara.
Ho an'ny ampahany, ny bateria an'ny 3.300 mAh miaraka amin'ity tontonana ity dia ataovy maharitra ny terminal fa tsy misy olana isan'andro amin'ny fampiasana tsy tapaka, Gaga be izahay tamin'ny fahaleovan-tena nasehon'ity Samsung Galaxy A7 ity tamin'ny taona 2018. Manana famandrihana haingana amin'ny famandrihana 40W sy tsy misy tariby amin'ny 15W izahay, zavatra iray izay ankasitrahana tokoa. Tsy halahelo na inona na inona izahay, raha mamela azy ny microUSB, mazava ho azy.
Nasongadinay ny fomba fiasan'ny video amin'ny fomba marina ary haingana miaraka amin'ny mpamaky ny dian-tànany miorina eo anilany, safidy tsara izay tsy isalasalana fa namokatra vokatra mahatalanjona. Ny scanner amin'ny famantaran-tarehy dia mahita olana bebe kokoa rehefa tsy mijoro tsara isika na tsy misy jiro tsara, fa mameno tsara ny mpamaky ny rantsantanana izany.
Multimédia sy fifandraisana: Eto dia mampiseho ny tratrany ny Galaxy A7 (2018)
Mihaona vaovao izahay Panel 6-inch Super AMOLED misy vahaolana feno HD+, tsy misy karazana fanamarihana, izay miteraka zana-kazo goavambe ho an'ny zavatra azon'i Samsung atolotra, fa ankoatr'izay, manome valiny tena tsara, miaraka amin'ny fakantsary sy ny fizakan-tena, tsy isalasalana fa andry fahatelo an'io Samsung io Galaxy A7 an'ny mpanamory fiaramanidina 2018. Famirapiratana tsara amin'ny toe-javatra ratsy, famahana tsara sy kalitao amin'ny sary izay mahatonga antsika hanadino amin'ny fampiasana isan'andro fa miatrika terminal izay mitentina latsaky ny 400 euro isika, marika vitsivitsy no afaka mametraka ireo takelaka amin'ity. kalitao. Tsara daholo ny feo inona no antenaina amin'ny mpandahateny tokana any ambany,
Raha eo amin'ny fifandraisana, manana microUSB OTG, chip NFC izahay handoavana vola sy fifandraisana haingana, seranan-tsambo Jack 3,5 mm, GPS, Bluetooth 5.0 farany ary WiFI mahazatra, miaraka amina puce CAT6 LTE. Azo antoka fa tsy hanan-java-mahory na inona na inona amin'ity Galaxy A7 amin'ny ambaratonga ny fampiasana isan'andro isika, noho izany dia nampifanohitra azy isan'andro.
Andao atombohy amin'izay tiako kely indrindra amin'ity Samsung Galaxy A7 ity amin'ny taona 2018. Tsy azoko atao ny mieritreritra fa ny terminal amin'ity vidiny ity sy ity kalitao ity dia tsy afaka mandiso ny zava-drehetra amin'ny antsipiriany toy ny fampidirana ny port microUSB, amin'ny fanitarana tanteraka ny tariby USB-C sy ireo mety rehetra hanesoran'i Samsung antsika fotsiny noho izany. . Ny zavatra faharoa tiako asongadina dia ny elanelam-bidin'izy ireo, na dia tsy isalasalana aza fa hianjera am-pilaminana izy ireo ary hiseho ny tolotra, 359 Euros ny vidiny handinihana ny fandinihana fomba hafa, indrindra ny fiheverana ireo zana-kazo manandanja an'ity Galaxy A7 ity.
Ny tsara indrindra
Andao isika handeha amin'ny zavatra tsara, Ny Galaxy A7 dia manana tontonana tena tsara, sarotra mifanandrify, miaraka amin'izay tsy tiany hatao raha tsy misy ny mpamaky ny rantsan-tànana, mitady fomba hafa toa ny fampidirana azy eo amin'ny sisiny, ankasitrahana indrindra. Ny fakan-tsary dia be dia be ary io zoro ultra malalaka io dia hamela antsika hanao fika. Ary farany, ny fizakantenan'ny terminal sy ny fitaovana fananganana azy dia mahatonga antsika hahatsapa ny kalitao amin'ny fifandraisana voalohany.
€299 a €359
Raha fintinina dia nanao filokana mampidi-doza i Samsung, manome antsika sokay kely sy fasika iray hafa amin'ity terminal ity izay mamirapiratra noho ny fombany sy ny endriny, saingy misy lesoka tsy takatry ny saina toa ny port microUSB. Mazava ho azy, raha mitady ny fahatokisan-tena entin'ny marika toa ny Samsung ianao dia terminal eo afovoany midadasika indrindra izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny Samsung Galaxy A7 (2018), fakantsary telo eo afovoany
hector fragoso dia hoy izy:
Hanova lalao moto z2 ho an'ny samsung A7 ve ianao?
Mamaly an'i hector fragoso
Michael Hernandez dia hoy izy:
Na dia tsara kokoa aza ny efijery an'io, tsy dia mahita fanentanana ampy aho raha tsy hoe tsy azo tsinontsinoavina na tsy misy dikany ny fampiasam-bola. Very USB-C ianao na dia mandresy eo amin'ny écran aza.
Valiny tamin'i Miguel Hernandez
Honor dia ny marika finday avo lenta an'ny Singles Day mpivarotra ao Shina
Aza mamela zombie mijanona ao amin'ny Don Zombie